ကိုဗစ်ပိုး တွေ့ရှိလူနာတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရင်း မြွေလည်းဖမ်း ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလာတဲ့ ဝေဠုကျော် – Let Pan Daily
ကိုဗစ်ပိုး တွေ့ရှိလူနာတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရင်း မြွေလည်းဖမ်း ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလာတဲ့ ဝေဠုကျော်
ပရိသတ်အချစ်တော်ပရဟိတမင်းသားကြီး ဝေဠုကျော်ကတော့ အများအကျိုးပြုပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေမှာ လူအားငွေအားနဲ့ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်လေ့ရှိသူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ပိုးကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ကတည်းက အိမ်တောင်မပြန်တော့ဘဲ ဖိဖိစီးစီးနဲ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာလည်း ယနေ့ အချိန်ထိပဲလို့ ဆိုရမှာပါ။
အဓိကအားဖြင့် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိလူနာတွေကို သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆေးဖြန်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေသလို ကိုဗစ်ပိုး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ လူနာလည်း သယ်၊ မြွေလည်း ဖမ်းခဲ့ရတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့အကြောင်းကို မျှဝေလာပါတယ်။ “COVID 19 လူနာတွေလည်းသယ်ရ မြွေလည်း ဖမ်းရတယ်ဗျ…သကောင့်သားက ကျတော့အခန်းထဲက PPE. ထည့်တဲ့ကတ်ထူပုံးတွေ ကြားထဲမှာ ငြိမ့်နေတာလေ… PPE ယူတဲ့သူက အမြီးမြင်လိုက်တော့ ကင်းလိပ်ချော လို့ ထင်လိုက်တာတဲ့… သေချာ ကြည့်မှ မြွေမှန်းသိတာ… အဲ့ဒီကျတော့ ကျွန်တော်ကဖမ်းပြီး လွတ်ရာမှာ သွားလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်” ဆိုပြီး မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ဝေဠုကျော်ကတော့ ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ မြွေလေးကို လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင် သတ္တဝါတွေအားလုံး ဘေးရန်ကင်းရှင်းစေဖို့လည်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ခဲ့ပါသေးတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ.. ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ပရဟိတလုပ်နေသူတွေအကုန်လုံး ဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းရှင်းပြီး အများအကျိုးကို စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် လုပ်နိုင်ဖို့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးကြပါဦးနော်။
ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ပရဟိတမင္းသားႀကီး ေဝဠဳေက်ာ္ကေတာ့ အမ်ားအက်ိဳးျပဳပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြမွာ လူအားေငြအားနဲ႔ အင္တိုက္အားတိုက္ ပါဝင္ေလ့ရွိသူပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္ပိုးကာကြယ္ကုသေရးလုပ္ငန္းေတြစတင္ကတည္းက အိမ္ေတာင္မျပန္ေတာ့ဘဲ ဖိဖိစီးစီးနဲ႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနတာလည္း ယေန႔ အခ်ိန္ထိပဲလို႔ ဆိုရမွာပါ။
အဓိကအားျဖင့္ ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕ရွိလူနာေတြကို သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆးျဖန္းျခင္းလုပ္ငန္းေတြေဆာင္႐ြက္ေနသလို ကိုဗစ္ပိုး နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ မွ်ေဝေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ လူနာလည္း သယ္၊ ေႁမြလည္း ဖမ္းခဲ့ရတဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔အေၾကာင္းကို မွ်ေဝလာပါတယ္။ “COVID 19 လူနာေတြလည္းသယ္ရ ေႁမြလည္း ဖမ္းရတယ္ဗ်…သေကာင့္သားက က်ေတာ့အခန္းထဲက PPE. ထည့္တဲ့ကတ္ထူပုံးေတြ ၾကားထဲမွာ ၿငိမ့္ေနတာေလ… PPE ယူတဲ့သူက အၿမီးျမင္လိုက္ေတာ့ ကင္းလိပ္ေခ်ာ လို႔ ထင္လိုက္တာတဲ့… ေသခ်ာ ၾကည့္မွ ေႁမြမွန္းသိတာ… အဲ့ဒီက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကဖမ္းၿပီး လြတ္ရာမွာ သြားလႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္” ဆိုၿပီး မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။
ေဝဠဳေက်ာ္ကေတာ့ ဖမ္းမိခဲ့တဲ့ ေႁမြေလးကို လႊတ္ေပးခဲ့တဲ့အျပင္ သတၱဝါေတြအားလုံး ေဘးရန္ကင္းရွင္းေစဖို႔လည္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ခဲ့ပါေသးတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ.. ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ၿပီး ပရဟိတလုပ္ေနသူေတြအကုန္လုံး ေဘးအႏၲရာယ္ေတြကင္းရွင္းၿပီး အမ်ားအက်ိဳးကို စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ေပးၾကပါဦးေနာ္။
မြန်မာ ဝတ်စုံလေး နဲ့ အရမ်းကို လှလွန်း တဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း
“ကိုယ့်ပုံကိုကြည့်ပြီး ကဲရဲ့ သလို နဲ့ ပါးစပ် အရသာခံနေတယ်” လို့ဆိုတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် (ရုပ်/သံ)
ဒီကာလမှာ ခက်ခဲနေပေမယ့် လည်း တတ်နိုင်သလောက် အိမ်မှာ ချက်ပြုတ်ကာ ကျွေးမွေး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စူးရှထက်